Physical Sales Product masaf - Funnel Of The Day
Physical Sales Product masaf
Si dhufan u weyn oo qurbaan dukaanka online baxaysa waxyaabaha aad ka eegi kartaa inay dhigay dukaan adiga oo isticmaalaya jirka masaf iibka alaabta.
istaraatijiyad Your marketing si ay u sameeyaan shaqo this baxay ayaa kaa caawin doonaa jidka dheer inta aad xaq u samayn.
Waxaad bilaabi kartaa iyadoo la abuurayo a aragti wanaagsan marka hore la sawiro iyo videos alaabta ku bixiyey.
content Tani waxay badanaa leeyahay saameyn fiican haddii uu ahbaa naftaada by.
Garaacista macaamiisha aad iman kara la headlines in qabsadaan ay fiiro had iyo jeer aad u shaqeeyaan yaabab tan iyo markii ay ka hela qadderin gacan koowaad.
Caddeynta of dhexgalka hore had iyo jeer ku hadla Muga alaabooyinka si mar walba sii page a of Kurtumm iyo dib u eegis la arki karo.
Last, laakiin ma yaraan waa wanaagsan yahay in la xasuusto in aad dhisayso xidhiidh la macaamilka kasta oo doorto in uu wax ku iibsatid on your website, iyo xiriirka taas oo ku salaysan isku halleeya. Sidaas si adag u taagnaato, waayo, aad wax soo saarka!
Sidaas, heli Carruur ah, qaadan shaqeeyo off iyo hubi in aad ha seegin hal mar gaarka ah dalab.
Filed Under: Clickfunnels Tagged With: jirka masaf iibka alaabta